Tsy mpisolovava afaka manome torohevitra araka ny lalàna. Ny valin ny fitsarana Tampony-ny
Tamin’ny volana martsa lasa teo, ilay Raharaha Nanoritra dia namoaka tatitra izay nanasongadina ny maha samy hafa izay misy eo amin’ny fangatahana sy ny famatsiana ny lalàna: amin’ny ankapobeny, ao Italia, misy kokoa ny mpisolovava noho ireo izay mety. Izany dia hanana ny fiantraikany tsy azo ihodivirana eo amin’ny fidiram-bola ny mpahay lalàna, izay tao anatin’ny taona vitsivitsy dia nandatsaka be noho ny fihenan’ny amin’ny vidin-javatra noho ny be loatra ny fifaninanana. Ny olana dia ho mpisolo vava, tsy misy afa-tsy ny fifaninanana avy ireo mpiara-miasa aminy, nefa koa fa ny manam-pahaizana manokana ao amin’ny lalàna izay manome torohevitra araka ny lalàna raha tsy hoe tsy voasoratra anarana ao amin’ny bokim. Fifaninanana izay mety ho tsy mahafinaritra ho an’ny mpahay lalàna sy ny ho lasa toy ireo manana vola ny fotoana, ezaka sy ny vola, fa ara-dalàna. Raha ny tena izy, raha nanamafy ny Fitsarana Ambony, dia maro ny fitsarana, na dia tsy mpisolovava afaka manome torohevitra araka ny lalàna, ary tsy izay ihany, dia manana zo ny karama noho ny asa nomen’ny. Tsy mahazatra, na izany aza, izany no azo atao, satria misy toe-javatra izay ara-dalàna ny toro-hevitra dia ny mpisolovava manokana. Aoka ny hanazava ny olana amin’ny alalan’ny fandinihana izay azo atao, ary izay tsy afaka manao ny tsy mpisolovava. Vao mamaly io fanontaniana io dia tsy maintsy mahatsiaro inona no toe-piainana iray no manao azy ho mba hiantso ny tenany ho mpisolovava. Mba ho lasa mpisolovava amin’izao fotoana izao, dia ilaina ny nahazo ny mari-pahaizana momba ny Lalàna sy efa lasa ny Fanjakana fanadinana. Ankoatra izany, dia tsy maintsy ho tsy tapaka nisoratra anarana ho amin’ny matihanina Hisoratra anarana sy ny Cassa Forense sy ny maro hafa dia tsy maintsy manana ny VAT maro.
Ny lalàna dia mametraka fa ny fanampiana ny mpahay lalàna dia tsy maintsy noho ny antony etsy ambony. zato euro eo anoloan’ny Fitsaràna ihany, fa koa ny fahamarinan ny fandriampahalemana, ny olom-pirenena dia afaka na maneho ny tenany na ho ampian’ny ny manam-pahaizana ara-dalàna raha toa ianao ka tsy nisoratra anarana ao amin’ny Bokim. Mazava ho azy, ny fanampiana ny mpahay lalàna dia tsy maintsy tsy hoe noho ny fanampiana sy ny fiarovana eo anatrehan’ny fitsarana, fa koa ho an’ny rehetra mifandraika amin’ny asa, toy ny fandrafetana ny asa ao amin’ny fanontaniana, izay tsy afaka ny ho tanterahana amin’ny alalan’ny no manao azy, na ny fanampiana amin’ny fitadiavana marimaritra (rehefa izany dia tsy maintsy atao). Afa-tsy ny ireo faritra fanavahana, na izany aza, ny torohevitra araka ny lalàna koa ho nomen’ny tsy mpahay lalàna, araka ny voalaza ao amin’ny fitsarana noho ny Fitsarana Ambony. Mazava ho azy, any amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, mpisolovava manana bebe kokoa ny fahaizana manokana eo amin’ny lafiny ara-dalàna eo amin’ny fanajana ireo izay, na dia eo aza ny fananana nianatra nandritra ny taona maro ny marina, dia tsy. Mbola misy ireo olona izay tia ny mangataka ny hevitry ny hafa ny olona fa tsy mba mpahay lalàna, satria matetika ny onitra nananan’ny dia ambany. Amin’io lafiny io, dia ny tatitra momba ny fitsarana n° ‘ny Fitsarana Ambony, izay ny mpitsara ny Lapan’ny Fitsarana nanamafy fa: ny fampisehoana ara-miasa ao amin’ny sehatry ny fanampiana ara-dalàna dia natokana ho an’ireo izay nisoratra anarana tao amin’ny boky nanoritra afa-tsy ao amin’ny faritry ny fisiana, ny fanampiana sy ny fiarovana ny antoko ary, na ahoana na ahoana, ny mitarika fiaraha-miasa amin’ny ny Fitsarana ao anatin’ ny dingana. Any ivelany ireo fetra, ny asa ara-dalàna ny toro-hevitra sy fanampiana dia mety tsy azo heverina ho tsiambaratelo ny mpikambana ao amin’ny fiekem.
Noho ny fiaraha-mientana avy ny fitsarana, noho izany ny mpisolovava tsy manana ny manokana
Ohatra, azonao atao ny mampiasa ny iray tsy mpisolovava mba hitady torohevitra araka ny lalàna, ny zava-dehibe dia ny hoe tsy izany no natao ho ny manaraka ny fiarovana tao amin’ny fitsarana. Fa tsy mpisolovava afaka manolotra ny fanampiana ho an’ny milaza fa ny orinasa fiantohana ho an’ny milaza, mba hamaly ny fampitsaharana sy desist taratasy, na ho amin’ny fandrafetana ny fifanarahana na ny raharaham-barotra. Ireo asa, noho izany, izay tsy mpisolovava iray dia tsy mety ho voaheloka noho ny heloka bevava tsy ara-dalàna ny fanatanjahan-tena ny asa,»ho saziana fampidirana am-ponja hatramin’ny enim-bolana na amin’ny tsara avy zato sy telo euro dimy tsy miankina euro»(andininy faha- momba ny heloka Bevava). Amin’ny lafiny iray hafa dia ny firaisam-be eoropeana mihitsy mba hiaro ny foto-kevitry ny fahafahana ny fanomezana ny asa, izay ny asa fanompoana matihanina dia afaka ny ho voavonjy ny olona na, ho an’ny afa-tsy voafetra ny toe-javatra natokana lalàna mazava ho mpikambana ao amin’ny fiekem. Ny Fitsarana Ambony, ny ambony fanapahan-kevitra, dia fantatra fa tsy misy ny mpahay lalàna, ny zo karama noho ny toro-hevitra nomena. Etsy ankilany, raha nanamafy ny Fitsarana Tampony eo amin’ny vao haingana ny fitsarana n° amin’ny taona, koa ny torohevitra matihanina naneho ny alalan ny e-mail dia ny zo ho karama. Ny zava-dehibe dia tsy mba ho tonga manam-pahaizana manokana ao amin’ny lalàna izay manome torohevitra araka ny lalàna miaraka amin’ny fomba fijery ny tambin-karama dia tsy maintsy mandray ny andraikitra sy ny tranga fahadisoana, hisolo vaika ny mpanjifa. Raha, na izany aza, ny fanampiana ara-dalàna mifandray amin’ny lelan-javatra naneho ny lalàna dia tsy misy zo hahazo onitra, na dia rehefa ny hetsiky ny mahery setra, dia ilaina ny mpanjifa. Eny tokoa, ny farany dia afaka mangataka indray araka farany dia mandray karama, raha tsy misy ny refund ny tsy mpisolovava ho an’ny fandaniana incurred
Fanambarana ny vola miditra